Skin , နည်းပညာ »
Task bar ကို မြန်မာဖောင့် ပေါ်အောင် အဲဒီအတွက် windows မှာ ဖောင့် ပြောင်းဖို့ ပေးမထားပါဘူး။ ပြောင်းလို့ရတာတွေက အောက်က ၈ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Desktop မှာ right click လုပ်ပြီး properties ကို နှိပ်ပါတယ်။ Appearence ဆိုတဲ့ tab မှာ Advanced ကိုနှိပ်ပြီး အောက်ပါ ၈ မျိုးကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
1 . Active Title Bar
2 . Inactive Title Bar
3 . Icon
4 . Menu
5 . Massage box
6 . Palette title bar
7 . Selected Items
8 . Tool Tip
အဲဒါတွေပြောင်းပြီးတဲ့ အခါမှာ နေရာတော်တော်များများမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ပြောင်းသွားပေမယ့် task bar မှာ မပေါ်သေးပါဘူး။ အဲဒါကို ကျနော် ပြောင်းချင်လို့ My Myanmar ကို သုံးကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူက win ဖောင့်ကို အခြေခံထားတော့ စာလုံးတွေ တလွဲတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျနော်တို့က ဇော်ဂျီပဲ သုံးနေကြတာကိုး။ ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့လည်း uninstall program မပါပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ Total Uninstall သုံးပြီး ဖြုတ်လိုက်တော့လည်း သူပြင်ပေးလိုက်တဲ့ နေရာတွေမှာ unicode မပေါ်နိုင်တော့ဘူး။ Windows ပြန်တင်ရမလိုကို ဖြစ်နေတာ Styler လေးနဲ့မှ အဆင်ပြေသွားတယ်။
Download Mirror 1 : ဒီမှာရယူပါ (Zip)
Download Mirror 2: ဒီမှာထပ်ယူပါ (Rar)
အဲဒါလေး ဒေါင်းပြီး run လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် All programs မှာ Styler ကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
task bar မှ styler ရဲ့ tray icon လေးကို right click လုပ်ပြီး show ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ style tab မှာ font ကိုနှိပ်ပြီး Zawgyi-One ကို ရွေးပေးပြီး This setting is always used ဆိုတာကို check ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Apply Changes ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အောက်ပါအတိုင်း task bar မှာ မြန်မာဖောင့် ပေါ်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Toolbar ဆိုတဲ့ tab မှာ စတိုင်တွေကို ရွေးပြီး Double click ပေးပြီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းပြီးသား toolbar မှာ အလွယ်တကူ ပုံစံတွေ ပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
အခြားသော shadow တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲ စမ်းလိုက်တော့နော်။
အခု ဒါလေးသုံးပြီး မြန်မာဖောင့်ပြောင်းတာတွေကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြားသော ဘာသာစကား ဘယ်နှစ်မျိုးပဲ တတ်တတ်မိမိဘာသာစကားနဲ့ သုံးရတာလောက် ကျေနပ်ဖို့မကောင်းပါဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ် ။ ကျေနပ်ကြပါစေဗျာ ...